Ukukhangisa Komdabu: Indlela Entsha Yokukhuthaza Imikhiqizo Yakho | Martech Zone
Uma ubukhangisa ngemikhiqizo yakho isikhathi eside kunemiphumela emihle, mhlawumbe yisikhathi osicabangile ukukhangisa kwendabuko njengesixazululo saphakade sezinkinga zakho. Izikhangiso zabomdabu zizokusiza, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokukhulisa izikhangiso zakho ezikhona zokuxhumana nomphakathi kanye nokushayela abasebenzisi abakhonjwe kakhulu kokuqukethwe kwakho. Kepha okokuqala, ake singene yini yezikhangiso zomdabu ngaphambi kokuba sizicabange kanjani.
Incazelo esetshenziswe kakhulu yesikhangiso sendabuko yileyo naleyo I-Content Marketing Institute, echaza ukukhangisa komdabu njenge:
Noma yiluphi uhlobo lokukhangisa olukhokhelwayo oluletha ulwazi oluqondiswe kakhulu, oluhehayo, nolusizo kuzethameli zakho ngendlela yokuthi lungahlukaniswa nokuqukethwe okungezona izikhangiso noma okwendabuko.
Kukhangisa ngendlela izithameli zakho ezingakuhumushi ngokushesha okuqukethwe njengesikhangiso kepha zikubona njengokuqukethwe okuvamile. Ngokwengeziwe, okuqukethwe sekuvele kuyasebenziseka futhi kuyathakazelisa kuzithameli zakho ngakho-ke kuzobonakala kungathandeki noma kungasetshenziswanga.
Izikhangiso zabomdabu ziza ngobukhulu nobukhulu obuhlukahlukene. Ungakwenza kuGoogle ngendlela yemiphumela yosesho ekhokhelwayo. Ungakwenza futhi ezinkundleni zokuxhumana ngohlobo lwezikhala ezixhasiwe noma ezithuthukisiwe ku-Facebook, izibuyekezo ezixhasiwe ku-LinkedIn, nokufakwa ohlwini okunyuswe ku-Twitter. Ungathumela futhi izindatshana kumasayithi weziphathimandla eziphakeme njengeThe New York Times, The Huffington Post, BuzzFeed, neForbes. Ungasebenzisa futhi izinjini zezincomo zokuqukethwe ukwenza izikhangiso zakho zomdabu. Lezi izinhlu zezindatshana ezinconyiwe ezivela kuyo yonke i-intanethi ezivela ezansi kwezindatshana ozifunda kwamanye amawebhusayithi.
Ngakho-ke uzihlanganisa kanjani izikhangiso zomdabu emkhankasweni wakho wokumaketha?
Yiba Nomgomo Ocacile
Izikhangiso zabomdabu zinezinzuzo eziningi noma ngabe zithatha hlobo luni. Bangakusiza ukwakha ukwazisa nokwethembela umkhiqizo wakho futhi bakusize uthole ababhalisile abaningi bokuqukethwe kwakho. Enye inzuzo ebalulekile ukuthi akudingeki ngaso sonke isikhathi ukuthi uqhubeke nokukhipha okuqukethwe okusha. Ungaheha izethameli ezintsha usebenzisa okuthunyelwe owawukushicilele ngaphambilini. Kunezinye izinzuzo ozithola ngezikhangiso zomdabu, ezinjengobufakazi bezenhlalo ne-SEO esebenzayo yomkhiqizo wakho. Izikhangiso zabomdabu ziqoqa ubufakazi bezenhlalo ngendlela yokuthandwa namazwana, ngokungafani nezikhangiso eziningi zendabuko. Uma uphakamisa okuthunyelwe kwakho kungosi yezokuxhumana, uthola ukwethula umyalezo wakho kuzithameli ezinkulu, okusho ukuthi uthola ithrafikhi eningi yebhulogi yakho noma yewebhusayithi yakho. Ukukhangisa komdabu kusiza kakhulu uma usaqala futhi ungakayitholi i-SEO yakho ngendlela okwamanje.
Ngohlobo lobufakazi bezenhlalo obuthola kusuka kuzikhangiso zomdabu, umlayezo wakho ubonakala unokwethenjelwa futhi ngenxa yalokho kungenzeka ukuthi ungene egazini. Lapho abantu abaningi bazi ngomkhiqizo wakho, ungahumushela egunyeni eliphakeme lomkhiqizo wakho ngendlela yezimpawu zomphakathi nezixhumanisi, ezingasiza ekwenzeni isayithi lakho libekwe phezulu.
Ngokukhangisa komdabu, ungakhulisa kakhulu izethameli zakho ezinkundleni zokuxhumana. Okuthunyelwe kwakho okuxhasiwe ku-Facebook naku-Twitter kungaletha abalandeli abasha nokuthandwa, noma ngabe kuphela uma okuqukethwe kuzwelana nababukeli.
Ikhwalithi ngaphambi Kobuningi
Ukuthola okuningi ezikhangisweni zakho ezingezinhle, kuzofanele udale okuqukethwe okunikeza inani labafundi bakho, kuyathakazelisa, futhi kudonsela ukunakwa. U-Erin Schneider, umhleli wenkonzo yokubhala eseyi eshibhile online, uthi,
Noma yini oyenzayo, ungakwenzi okuqukethwe okubukeka sengathi ufaka umkhiqizo wakho. Abantu abathandi ukuthengiselwa obala.
Okokuqala, qiniseka ukuthi ushicilela okuqukethwe kusikhangiso sendabuko kuwebhusayithi yakho. Kufanele futhi uqiniseke ukuthi ikhwalithi yokuqukethwe iphezulu, ukuthi ifaka ukubizelwa esenzweni, nokuthi ibhekiswe kahle kubabukeli abafanele abangeke bakuthole kuphazamisa kakhulu.
Sebenzisa Ngokukhomba Okuhle
Hlala uye kubasebenzisi asebavele bangamakhasimende akho noma afana kakhulu namakhasimende akho. Kufanele futhi usebenzise ukuhlehlisa kabusha ukuze kuzuze wena, ukuhambela abantu asebeke bavakashela iwebhusayithi yakho ngaphambilini ukubuka noma yimiphi imikhiqizo noma izinsizakalo zakho.
Izikhangiso Zomdabu zivela kuSocial Media, nazo
Njengoba sishilo ekuqaleni, ukukhangisa komdabu kufaka okungaphezulu kokuthunyelwe okukhuthazwayo ezinkundleni zokuxhumana. Ungabhala futhi izindatshana ezixhasiwe kumasayithi aphezulu emidiya afana neForbes ne-Buzz Feed. Lokhu okuthunyelwe kuzodonsela ukunaka kumkhiqizo wakho futhi kungashintsha nemicabango ekhona engemihle ngomkhiqizo wakho.
Ngokuya ngokuthi isabelomali sakho siqine kangakanani, uzothola nezinsizakalo zokuncoma okuqukethwe eziwusizo. Bangakhuphula ngokumangazayo inani lokubukwa okutholayo kokuqukethwe kwakho ngokukubeka ngaphakathi kwesiza somshicileli omkhulu.
Noma ngabe ubheka kanjani, ukukhangisa komdabu kuyasiza impela, iningi labakhangisi manje lisisebenzisa ngenkuthalo. Kuyindlela enhle yokubamba izethameli ezintsha futhi uthole umkhiqizo wakho laphaya.
Tags: ukukhangisa kwendabukoukukhushulwa komkhiqizokuyini ukukhangisa komdabu
USamantha R. Gilbert usebenze njengentatheli esikhungweni sokushicilela online ku-New York, e-USA iminyaka engu-2. Ungumpetha wokubhala osezihlokweni ezinjengokubhuloga, ubuciko besimanje nemfundo.